Inona no sakafo avo lenta amin'ny tsiranoka?
Ny kômgôridra no iray amin'ireo singa fototra telo amin'ny vokatra rehetra. Ho an'ny sela ao amin'ny vatan'olombelona, ​​dia loharanon-kery ny karbôkita tsotra. Ny sakafo sasany dia misy carbohydrate maromaro, fa ny hafa kosa manana proteinina na tavy. Ny habetsahan'ny kômôrità avo dia hita amin'ny ankamaroan'ny zavamaniry. Eto ambany eto dia hojerentsika hoe sakafo inona no manankarena karbôgresina sy izay misy azy ireo.
Ny sela ao amin'ny vatan'olombelona dia afaka mampiasa ny tsiranoka tsotra fotsiny - glucose, fructose, lactose. Mba 'hampiasana' ny voamadinika be pitsiny , dia mila fizotran'ny fizarana ny organism. Misy ihany koa ny voamadinika be pitsiny, izay misy seluloza, io karazana hery io dia tsy afaka hiparitaka ny vatana ary aseho amin'ny endrika tsy miova. Noho izany, ny sakafo izay manankarena amin'ny fibra sy ny fambolena saribao dia tsy afaka "manetona" haingana ny olona iray, fa ny sakafo misy tsiranoka tsotra no loharanon'ny angovo haingana indrindra.
Ho an'ny vokatra ahitana tsiranoka tsotra dia ahitana siramamy, poti-tsakafo, menaka ary menaka, ary koa vokatra legioma - vary, sira sy buckwheat papango. Amin'ny voankazo maina - be dia be koa ny akanjo sy datin'ny kômisia. Ao anatin'ireo vokatra rehetra ireo dia ny hena kômôhy dia mihoatra ny 65 g ho an'ny 100 grama.
Ao amin'ny vondrona manaraka vokatra, izay misy carbohydrates maro, dia halva, mofo isan-karazany. Ny lisitra dia ampian'ireo solontenan'ny zavamaniry maneran-tany avy amin'ny fianakavian'ny legumes - ahitra sy tsaramaso. Ao amin'ireo vokatra ireo, manodidina ny 40-60% amin'ny fampiendrehana dia ny tsiranoka.
Inona no sakafo misy voankazo maro be?
Ny voankazo tsotra dia manankarena amin'ny voankazo mamy. Misy voankazo betsaka be dia be ao anaty voaloboka, peaches, abriko.
Rehefa maina ny voankazo, mba hahazoana voankazo maina , dia mipoitra avy amin'ny voankazo ny fahantrana, hany ka mihabetsaka ny voan'ny glucose. Noho izany, amin'ny daty maina dia misy 71,9% kilaometatra, ary eo amin'ny voankazo vaovao eo amin'ny 40%.
Ho an'ny vokatra misy tsiranoka maro be, dia asio ovy. Ny ampahany amin'ny tandrok'io fotony io dia manodidina ny 20%. Ny ombidia dia mora mora miova ho karazana kojakoja tsotra ao amin'ny vatantsika ary, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fikarakarana ara-batana dia manomboka amin'ny endrika fivarotana matavy.
Iray amin'ireo loharanom-baovao malaza indrindra amin'ny famokarana herinaratra haingana ho an'ny atidoha ny sôkôla. Ahitana 60% -n'ny kômôrida mora simba izy io. Noho izany, ny voankazo 100 g amin'io vokatra io alohan'ny fanadinana dia manome antoka ny vokatra tsara.
Maro amin'ireo tsiranoka no hita amin'ny fisotroana zava-mamy ary amin'ny zava-pisotro mihintsy avy amin'ny vovo-koditra. Ny mpanamboatra sasany dia nametraka ny siramamy vita amin'ny siramamy vita amin'ny siramamy.
Garcinia ho an'ny fatiantoka
Ny trondro Hoki - tsara sy ratsy
Mofo maitso - tsara sy ratsy
Biby hena - tsara sy ratsy
Sesame - tsara sy ratsy
Polba - toetra mahasoa
Tombo-tsoa amin'ny siramamy
Inona no ilaina ho an'ny mofomamy mafana?
Endriky ny sôkôla
Apple cider - tsara sy ratsy
Karohy ho an'ny fahavoazana
Gillian Michaels - Tsy misy olana
Ny voany misy paoma - tsara sy ratsy
Quota amin'ny IVF
Inona no dikan'ny hoe Timoty?
Mody am-polony am-behivavy
Eco-veneer indray mandeha
Fitafy ankizivavy fitondra amin'ny vehivavy
Voampanga ho fanolanana i Luke Besson
1 Jona - Andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy
Ahoana ny fomba hahatongavana ho tompovavy?
Indian rice sea - trano mahasoa
Vitaminina rehefa manomana vohoka ho an'ny vehivavy - ahoana no ahafahana manao safidy tsara?
Ny menaka Oksolinovaya - torolàlana amin'ny fampiasana azy amin'ny fitondrana vohoka
Pantyhose ho an'ny vehivavy bevohoka
Krôlôjia amin'ny endrik'i Tiffany
Ahoana no hanaovana sakafo ho an'ny saribakoly?
Sausage cookie cookie - recipe
Hypnotherapy - ny fototry ny fomba, ny teoria, ny fampiofanana, ny boky, ny teknika, ny ahoana ny fivoriana?
Fitafiana nasionaly alemana
Nahoana ny kisoa no mijanona foana?